အခဈြသနျ့သနျ့လေး – My Blog
ရှရေညျဝငျးထိနျ ဘ၀ ရှတေ့ကျလမျး အတှကျ ရနျကုနျမွို့ကို လာခဲ့သညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျအတှကျ ဧရာမ စှနျ့စားခနျးကွီး တခု ဖွဈသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျသညျ အဖနေဲ့ အမေ အတနျတနျ တားတဲ့ကွားက ကွီးပှားတိုးးတကျဖို့ ထှကျခဲ့လိုကျသညျ ။ အမဖေ့ကျက ဆှမြေိုးတယောကျရဲ့အိမျမှာ စရောကျရောကျခငျြး ခဏနသေညျ ။ ခကျြခငျြး အလုပျ မရလို့ အလုပျရှာနတောနဲ့ တပတျမက ကွာသှားသညျ ။ ဆှမြေိုးအိမျကို အားနာတာကွောငျ့ ဘာရရ လုပျမညျလို့ ဆုံးဖွတျပွီး တဆိုငျဝငျ တဆိုငျထှကျ လိုကျမေးသညျ ။ အလုပျတောငျးသညျ ။ “ စူပါ ဂလုပျ ” ဆိုတဲ့ စူပါမားကကျကွီးမှာ အရောငျး ဝနျထမျး အလုပျ ရသှားသညျ ။ ဘာဘဲဖွဈဖွဈ အလုပျတော့ ရသှားပွီ ဆိုပွီး ရှရေညျဝငျးထိနျ ပြျောသှားသညျ ။ လကျရှိ နနေတေဲ့ ဆှမြေိုးအိမျကိုလညျး နခေစားခလေး ပေးနိုငျပွီမို့ သိပျ အားမနာရတော့ဘူး ။ အမွနျဆုံး မိနျးကလေးဆောငျ တဆောငျကို ပွောငျးနေ နိုငျဖို့ ကွိုးစားသညျ ။
ရှရေညျဝငျးထိနျက တောသူပမေယျ့ အရပျကောငျးသညျ ။ အသားဖှေးသညျ ။ ကိုယျလုံးကလညျး သိပျ တောငျ့တောငျ့ထယျထယျကွီး မဟုတျပမေယျ့ ရှိသငျ့သလောကျ ရှိသညျ ။ ယောကျြားသားတို့ မကျြစိကစြရာ မိနျးမတယောကျမို့ ဆိုငျမနျနဂြော အကွီးဆုံးက မွငျတတျသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျကို ကကျရှာ အလုပျကနေ ရုံးခနျးထဲ ရှလေို့ကျသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျ အခြိနျတိုတို နဲ့ တဆငျ့မွငျ့သှားသညျ ။ ရုပျရညျက ပွပွေဈ စကားပွောကလညျး ခြိုတာမို့ ရှရေညျဝငျးထိနျကို စူပါမားကကျက ဝနျထမျးတှရေော အုပျခြုပျသူတှရေော ခငျမငျကွ ကွိုကျကွသညျ ။ ဒီစူပါမားကကျကွီးကို နယျစပျကုနျသှယျရေး လုပျနတေဲ့ ကုနျသညျတှေ က ကုနျပစ်စညျးတှေ လာသှငျးကွလို့ ရှရေညျဝငျးထိနျ လုပျနတေဲ့ ရုံးခနျးကို စီးပှားရေးသမား ကုနျသညျတှဝေငျထှကျနကွေတဲ့အထဲ ရုပျသနားကမား နဲ့ နယျစပျက လာတယျ ဆိုတဲ့ ကိုရှသေိမျးမငျး ဆိုတဲ့လူတယောကျနဲ့ ရှရေညျဝငျးထိနျ ခငျမငျ ရငျးနှီးသှားသညျ ။
ကိုရှသေိမျးမငျးက သနျ့သနျ့ပွနျ့ပွနျ့ သဘောကောငျး ယဉျကြေးတဲ့ လူတယောကျပါ ။ စူပါမားကကျကွီးကို ထိုငျးဖကျက ကုနျပစ်စညျးတှေ တျောတျောမြားမြား သှငျးတဲ့ လူတယောကျ လို့ မနျနဂြောတှကေ ပွောပွဖူးသညျ ။ အကွီးဆုံး မနျနဂြောနဲ့လညျး လညျပငျးဖကျ ပေါငျးသငျးနတေဲ့ လူမို့ ဆိုငျကွီးတဆိုငျလုံးက ဝနျထမျး အလုပျသမားတှေ က “ ကိုရှသေိမျးမငျး ”ကို မသိသူ မရှိ အားလုံးက ခဈြခငျကွသညျ ။ သူကလညျးလကျဖှာသညျ ။ လကျမခကျဘူး ။ ပေးသညျ ။ ကြှေးသညျ ။ လူ့အကြော လူ့မနောကို သိသညျ ။ ပေါငျးတတျသညျ ။ ဝငျတတျ ထှကျတတျသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျလညျး မကွာခငျဘဲ မိနျးမဆောငျတဆောငျကို ပွောငျးဖွဈသှားသညျ ။ အခု ရှရေညျဝငျးထိနျ ကမာရှတျ လှညျးတနျးမှာ နသေညျ ။ စညျကား ရှုပျထှေးနတေဲ့ လှညျးတနျးလမျးမှာ နနေရေတာကို ရှရေညျဝငျးထိနျ ဂုဏျယူသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျ နတေဲ့ အဆောငျမှာက မိနျးကလေးတှေ အမြားကွီး နသေညျ ။ မျောဒယျသငျတနျး တကျနသေူတှေ ရှိသလို ကတေီဗီမှာ လုပျနသေူတှလေညျး ရှိသညျ ။
ရှရေညျဝငျးထိနျ နဲ့ မိနျးကလေးတှေ ခငျမငျသှားကွတော့ သတငျးစုံ သိရ ကွားရ သညျ ။ ရှတေ့ကျလမျးအတှကျ ဘာသငျတနျးတှေ တကျရငျ ကောငျးမလဲ အကွံဉာဏျတှေ ရလာသညျ ။ ကိုရှသေိမျးမငျး လညျး စူပါမားကကျကွီး တခုလုံးမှာ အလှဆုံး ရှရေညျဝငျးထိနျကို သဘောကပြွီး ရှရေညျဝငျးထိနျကို လကျဆောငျလေးတှေ ပေးပွီး ခငျမငျအောငျ “ ဝငျ ”လတေော့သညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျလညျး နယျက မိဘတှဆေီကို ငှလေညျး ပို့ခငျြတာကွောငျ့ အစစ ခြှတော ကဈြနရေတဲ့ အခြိနျ အခုလို “ ခြှေ”လာတဲ့ ကိုရှသေိမျးမငျးကို ကွာလာတော့ “ ကွှေ ”လာသညျ ။ သူတို့ သာမနျ ခငျမငျမှုထကျ သာတဲ့ ပိုတဲ့ ဘျောဒါတှေ ဖွဈလာကွသညျ ။ ဆိုငျက အလုပျပွနျခြိနျမှာ ကိုရှသေိမျးမငျးက လာစောငျ့နတေတျသညျ ။ နနျးကွီးသုတျလေး ..ရှမျး ခေါကျဆှဲလေး..အတူတူ စားပွီးမှ လှညျးတနျးက အဆောငျအောကျအထိ ကိုရှသေိမျးမငျးက ရှရေညျဝငျးထိနျကို လိုကျပို့သညျ ။ သံယောဇဉျတှေ တရဈပွီး တရဈ ခညျြနှောငျမိလာကွတော့ ရှရေညျဝငျးထနျ နဲ့ ကိုရှသေိမျးမငျးတို့ ခဈြမိသှားကွသညျ ။
ကိုရှသေိမျးမငျးက ခဈြရေးဆို ခဈြစကားပွောလာသောအခါ ဒီလူကွီးက သူမ အတှကျ အားကိုးစရာ အမှီသဟဲ ပွုစရာ လူတယောကျလို့ ရှရေညျဝငျးထိနျ ထငျမိတဲ့အတှကျ သူ့ကို ပွနျခဈြလိုကျသညျ ။ ကိုရှသေိမျးမငျးသညျ အရမျး အလိုကျသိတတျတဲ့ လူတယောကျ လို့ ရှရေညျဝငျးထိနျ ထငျမိသညျ ။ အရမျးသဘောကောငျးသညျ ။ အနှမြော မရှိ ပေးတတျ ကမျးတတျသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျ အတှကျသာ မကဘူး ။ နယျက ရှရေညျဝငျးထိနျရဲ့ မိဘနှဈပါးနဲ့ မောငျနှမတှေ အတှကျလညျး တဖကျနိုငျငံက ပစ်စညျးတှေ ယူလာပေးတတျသညျ ။ ကိုရှသေိမျးမငျး တခါတခါ နယျစပျကို သှားရငျ ရှရေညျဝငျးထိနျ တယောကျ လှမျးပွီး ကနျြရဈရသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထနျ သညျ ကိုရှသေိမျးမငျး တယောကျ မွနျမွနျ ပွနျလာပါစေ ဆုတောငျးရတာ အမော ။ ပွနျလာတဲ့ အခါမှာလညျး တခါ တမြိုးမက ရှရေညျဝငျးထိနျကို ဆငျသညျ ။ သူ ပွောပွောပွတဲ့ တဖကျကမျးကိုလညျး ရှရေညျဝငျးထိနျ စိတျဝငျစားလာရသညျ ။
သူက နောကျတခါ သှားတဲ့အခါ ရှရေညျလေး လိုကျလညျပါလား..ရှရေညျလေးနဲ့ အကိုနဲ့ ဈေးလြောကျ ဝယျကွမယျ..အစားတှေ ဝယျစားကွမယျ…အရမျး ပြျောစရာပါလို့ ချေါသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျလညျး အလုပျက ခှငျ့ရရငျတော့ တပတျလောကျ လိုကျလညျခငျြလာသညျ ။ မနျနဂြောကွီးကို မေးမွနျး ခှငျ့တောငျးလိုကျတော့ မနျနဂြောကွီးက ပွုံးပွုံးကွီးနဲ့ ညညျးက ရှသေိမျးမငျးနဲ့ လိုကျသှားမလို့ပေါ့လေ…ရတယျ..ရတယျ..ငါ ခှငျ့ပွုတယျ….လို့ ခှငျ့ပေးသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျသညျ ခဈြသူနဲ့ အခုလို ညအိပျညနေ ခရီး လိုကျသှားရငျ သူတို့ ညိစှနျးကုနျမညျကို သိသညျ ။ သဘောပေါကျသညျ ။ ဒီလူ့ကို သူမ အရမျး ခဈြမိနပွေီ ။ ယုံလညျး ယုံကွညျသညျ ။ ပုံအပျဖို့ သူမ ဝနျမလေးဘူး ဆိုတော့ သူချေါရာကို လိုကျသှားတော့သညျ ။
တဖကျကမျးကို မကူးကွခငျ ဒီဖကျကမျးမှာ ဟိုတယျမှာ တည အိပျကွရသညျ ။ ရှရေညျဝငျးထိနျ လညျး ဒီညတော့ဖွငျ့ ခဈြသူနဲ့ အဆုံးစှနျအထိ ခဈဖွဈကွတော့မယျ လို့ ထငျထားသညျ ။ သို့ပမေယျ့ သူမကသာ မြှျောလငျ့ထားပမေယျ့ ကိုရှသေိမျးမငျးက ပါးကလေး မှေးမှေးပေးတာ နဖူးလေး နမျးတာလောကျကနေ မပိုဘူး ။ ရှရေညျဝငျးထိနျ သူ့ကို အားမရလိုကျတာ ။ တကုတငျထဲ အတူတူ အိပျကွပမေယျ့ သူ့ဖကျက စမလာတော့ ရှရေညျဝငျးထိနျလညျး ပွငျးပွလာတဲ့ စိတျအဟုနျကွောငျ့ သူ့ကို အတငျးဖကျ သူ့လကျတှကေို ဆှဲယူပွီး သူမ ရငျမို့မို့အပျေါကို တငျပေးလိုကျသညျ ။
ဒီလိုကတြော့ သကောငျ့သား မနနေိုငျတော့ဘဲ ရငျစိုငျတှကေို ပီပီပွငျပွငျ နယျဖတျတော့တာဘဲ ။ ထောငျမာနတေဲ့ ရှရေညျဝငျးထိနျရဲ့ ရငျသီးလေးတှကေိုလညျး သူ့လကျတှနေဲ့ ပှတျသညျ ။ သူ့လကျတှကေ ရှရေညျဝငျးထိနျရဲ့ တငျပါးတှကေိုလညျး ဆုပျနယျ ကိုငျတှယျသညျ ။ ဒါပမေယျ့ ရှဆေ့ကျ မတိုးဘဲ အိမျသာသှားမညျ ဆိုပွီး အိပျရာကနေ ထသှားလိုကျသညျ ။ သူ့ ပုဆိုးကွားက ထောငျထနတေဲ့ သူ့ဟာကွီးကို ရှရေညျ ဖတျြကနဲ တှလေို့ကျရတော့ သူလညျး ရှရေညျ့လိုဘဲ သဘာဝစိတျတှေ ပွငျးထနျနတေယျ ဆိုတာ သိလိုကျသညျ ။ သို့ပမေယျ့ သူက အိမျသာထဲမှာ အကွာကွီးဘဲ ကွာနခေဲ့ပွီး ပွနျထှကျလာတော့လညျး ရှရေညျ့ကို ဘာမှ ဆကျ မလုပျတော့ဘဲ “ အကိုကလေ..ရှရေညျ့ကို လကျထပျတဲ့ ညကမြှ အဆုံးစှနျးအထိ ခဈြခငျြတာ…အကိုက ရှရေညျ့ကို ခဈြတာ တကယျ့ အခဈြသနျ့သနျ့လေး နဲ့ ဆိုတာ ပွခငျြတယျ..” လို့ ပွောပွီး အိမျရှဖေ့ကျကို ထှကျသှားလိုကျသညျ ။
နောကျတနမှေ့ာ တဖကျကမျးကို ကူးကွတယျ ။ ဆိုငျ တျောတျောမြားမြားကို လိုကျပွပွီး ရှရေညျတို့ ဒီဖကျကမျးမှာတော့ ဟိုတယျ မှာ မတညျးကွဘဲ သူ့အသိမိတျဆှတေယောကျ ရဲ့ အိမျမှာ တညျးကွမယျ လို့ သူက ပွောသညျ ။ သူနဲ့ ရှရေညျ အဲဒီ အသိအိမျကို ရောကျသှားတော့ မိနျးမကွီး တယောကျက လှဲလို့ ဘယျသူမှ ရှိမနဘေူး ။ သူ့ကိုတော့ ရှရေညျ အရမျး အထငျကွီးသှားသညျ။ ရှရေညျ့ကို တကယျ့ မတ်ေတာစဈနဲ့ ခဈြတာလို့လညျး ယုံကွညျသထကျ ယုံကွညျသှားရသညျ ။ အိမျကွီးက ကွီးပွီး မိနျးမကွီးကလှဲရငျ ရှရေညျတို့ နှဈယောကျထဲ ဆိုတော့ အရမျး လှတျလပျတယျ လို့ ခံစားရသညျ ။ ညနစောကို သူက ဆိုငျကနေ မှာ ကြှေးသညျ ။ မိနျးမကွီး သှားဝယျလာပေးသညျ ရှရေညျ ထငျမိတာဘဲ ။ စားစရာတှနေဲ့ ခပျခါးခါး အခြိုရညျဘူးတှေ ကို သောကျစားကွပွီး ရှရေညျတို့ TV ထိုငျကွညျ့ကွသညျ ။ ထိုငျးစကားပွောတှမေို့ နားမလညျကွပမေယျ့တျောတျောကွာကွာ ကွညျ့ဖွဈကွသညျ ။
ရှရေညျလညျး အိပျငိုကျလာပမေယျ့ သူနဲ့ ဧညျ့ခနျးက ဆိုဖာအိအိကွီးပျေါမှာ ဖကျတှယျပွီး နရေတာကို ပိုကွိုကျလို့ အိပျခနျးထဲလညျး မပွောငျးဘဲ ဆိုဖာမှာ ဘဲ အိပျပဈလိုကျသညျ ။ အိပျမကျထဲမှာ ရှရေညျ့လကျတှေ ခွတှေကေို တုပျနှောငျထားတယျ လို့ မကျတော့ ရှရေညျ ရုနျးကနျရငျး အျောဟဈမိလိုကျသညျ ။ ဖတျြကနဲ နိုးလာတော့ ခေါငျးတှေ အုံနသေညျ ။ အေးစကျစကျကွီးလညျး ခံစားရသညျ ။ မကျြလုံးတှေ ကွိုးစားဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ရှရေညျ အရမျး တုနျလှုပျသှားသညျ ။ အိပျမကျ မဟုတျဘဲ တကယျ့ကို ရှရေညျ့ လကျတှေ ခွတှေကေို ကားယားကွီး တုပျခညျြထားတာကို သိလိုကျရသညျ ။ အို…ရှရေညျ့ကိုယျပျေါမှာ ဘာ အဝတျမှ ရှိမနဘေူး ။ ရှရေညျ ကိုယျတုံးလုံးကွီး…။ အကို..အကို ဘယျမှာလဲ….ကိုရှသေိမျးမငျး ဘယျမှာလဲ…။ အို..ယောကျြားကွီးတှေ သုံးလေးယောကျလောကျ ရှရေညျ့ကို ဝိုငျးကွညျ့နကွေသညျ ။ ရှရေညျလညျး နို့တှရေော ဖငျတှရေော အကုနျ ပျေါလို့ ။
မီးကွီးကလညျး ထိနျထိနျ လငျးနသေညျ ။ “ အကို..အကို…..ကိုရှသေိမျးမငျး…” လို့ ငိုယို အျောဟဈချေါတော့ လူတှထေဲက တရုတျကပွား ဘိနျးစားလို ပိနျကပျကပျနဲ့ လူကွီးက ရှရေညျဝငျးထိနျကို ကွညျ့ပွီး ရယျသညျ ။ “ တ မနနေဲ့..နငျ့ကို ရောငျးစားပွီး ဒီလူ လဈသှားပွီ….ဒီအခြိနျက စပွီး မငျးကို ဒို့တတှေ ပိုငျသှားပွီ..မငျးက ဒို့ရဲ့ ငှနေဲ့ ဝယျထားတဲ့ ငှဝေယျကြှနျ ဖွဈသှားပွီ..ဒို့ ခိုငျးတာကို လုပျ….ဒါဘဲ..” လို့ ခပျထနျထနျ မာမာ ပွောလိုကျသညျ ။ လူတှေ အားလုံးက ရှရေညျ့ ဝတျလဈစလဈ ကိုယျတှကေို စားတော့ ဝါးတော့မယျ့ မီးဝငျးဝငျးတောကျနတေဲ့ တဏှာခိုးတှေ ဝနေတေဲ့ မကျြလုံးကွီးတှနေဲ့ ဝိုငျး ကွညျ့နကွေသညျ ။
“ မလုပျပါနဲ့ရှငျ..ကမြ မိနျးမကောငျးပါ..ကမြကို လှတျပေးပါ….ရှဈခိုး တောငျးပနျပါတယျ….” “ ဒီမှာ စောကျကောငျမ ပါးစပျ ပိတျထားစမျး..နငျ့ရညျးစားက နငျ့ကို မလိုးခငျြလို့ မဟုတျဘူး. နငျ့ကို အပြိုစဈစဈ အနနေဲ့ ရောငျးသှားတော့ သူက ပိုကျဆံ ပိုရသှားတယျ..သိရဲ့လား..ငါတို့လညျး နငျ့ကို မလိုးဘူး….ပါကငျ ပှငျ့သှားမှာ စိုးလို့ ပါကငျ အနနေဲ့ ဈေးကွီး တငျရောငျးမှာ…နငျ့ကို လီးဘဲ စုတျခိုငျးမယျ …” ပွောပွောဆိုဆို ဒီ ဘိနျးစားပုံနဲ့ လူကွီးက သူ့ဘောငျးဘီပှကွီးကို ခြှတျခလြိုကျသညျ… ။
ညိုမောငျ ရှညျလြားတဲ့ သူ့လိငျတနျကွီးက မတျမတျကွီး ထောငျနသေညျ ။ “ မငျး လီးစုတျတာကို ငါတို့ ဗီဒီယို မှတျတမျး တငျထားမယျ…မငျးကို သုံးပေါကျစလုံးကို လိုးမယျ့ လီးကွီးကွီးနဲ့အာရပျကုလား သူဌေးကို ရောငျးစားမယျ…..ကဲ ငါတို့ လီးတှကေို စုတျပေးတော့..” မာပွီး ထောငျနကွေတဲ့ လီးတုတျတုတျကွီးတှကေို စုတျရပါတော့မယျ ။ အိုး..ရှေ၇ညျ အဖွဈဆိုးလိုကျတာရှငျ ။ ကိုရှသေိမျးမငျး ရကျစကျလိုကျတာ ..။ သူ့ကို အခဈြသနျ့သနျ့လေး နဲ့ ခဈြတဲ့ လူ လို့ ယုံမိတာ အမှားကွီး မှားသှားပွီ….။ တကယျတော့ အခဈြသနျ့သနျ့လေး နဲ့ ခဈြတယျ ဆိုတဲ့ ကိုရှသေိမျးမငျး အမညျခံ ကောကျတှဲ ( ချေါ ) ဂငျြမီ ( ချေါ ) လူခှေး သညျ နယျစပျက လူကုနျကူးဂိုဏျးကို မိနျးမပြိုလေးတှေ လာရောငျးခနြတေဲ့ ပှဲစား တယောကျဘဲ ဖွဈပါသညျ…. ပွီး။
ရွှေရည်ဝင်းထိန် ဘ၀ ရှေ့တက်လမ်း အတွက် ရန်ကုန်မြို့ကို လာခဲ့သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်အတွက် ဧရာမ စွန့်စားခန်းကြီး တခု ဖြစ်သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်သည် အဖေနဲ့ အမေ အတန်တန် တားတဲ့ကြားက ကြီးပွားတိုးးတက်ဖို့ ထွက်ခဲ့လိုက်သည် ။ အမေ့ဖက်က ဆွေမျိုးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာ စရောက်ရောက်ချင်း ခဏနေသည် ။ ချက်ချင်း အလုပ် မရလို့ အလုပ်ရှာနေတာနဲ့ တပတ်မက ကြာသွားသည် ။ ဆွေမျိုးအိမ်ကို အားနာတာကြောင့် ဘာရရ လုပ်မည်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တဆိုင်ဝင် တဆိုင်ထွက် လိုက်မေးသည် ။ အလုပ်တောင်းသည် ။ “ စူပါ ဂလုပ် ” ဆိုတဲ့ စူပါမားကက်ကြီးမှာ အရောင်း ဝန်ထမ်း အလုပ် ရသွားသည် ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်တော့ ရသွားပြီ ဆိုပြီး ရွှေရည်ဝင်းထိန် ပျော်သွားသည် ။ လက်ရှိ နေနေတဲ့ ဆွေမျိုးအိမ်ကိုလည်း နေခစားခလေး ပေးနိုင်ပြီမို့ သိပ် အားမနာရတော့ဘူး ။ အမြန်ဆုံး မိန်းကလေးဆောင် တဆောင်ကို ပြောင်းနေ နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသည် ။
ရွှေရည်ဝင်းထိန်က တောသူပေမယ့် အရပ်ကောင်းသည် ။ အသားဖွေးသည် ။ ကိုယ်လုံးကလည်း သိပ် တောင့်တောင့်ထယ်ထယ်ကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ရှိသင့်သလောက် ရှိသည် ။ ယောက်ျားသားတို့ မျက်စိကျစရာ မိန်းမတယောက်မို့ ဆိုင်မန်နေဂျာ အကြီးဆုံးက မြင်တတ်သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်ကို ကက်ရှာ အလုပ်ကနေ ရုံးခန်းထဲ ရွှေ့လိုက်သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန် အချိန်တိုတို နဲ့ တဆင့်မြင့်သွားသည် ။ ရုပ်ရည်က ပြေပြစ် စကားပြောကလည်း ချိုတာမို့ ရွှေရည်ဝင်းထိန်ကို စူပါမားကက်က ဝန်ထမ်းတွေရော အုပ်ချုပ်သူတွေရော ခင်မင်ကြ ကြိုက်ကြသည် ။ ဒီစူပါမားကက်ကြီးကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လုပ်နေတဲ့ ကုန်သည်တွေ က ကုန်ပစ္စည်းတွေ လာသွင်းကြလို့ ရွှေရည်ဝင်းထိန် လုပ်နေတဲ့ ရုံးခန်းကို စီးပွားရေးသမား ကုန်သည်တွေဝင်ထွက်နေကြတဲ့အထဲ ရုပ်သနားကမား နဲ့ နယ်စပ်က လာတယ် ဆိုတဲ့ ကိုရွှေသိမ်းမင်း ဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့ ရွှေရည်ဝင်းထိန် ခင်မင် ရင်းနှီးသွားသည် ။
ကိုရွှေသိမ်းမင်းက သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် သဘောကောင်း ယဉ်ကျေးတဲ့ လူတယောက်ပါ ။ စူပါမားကက်ကြီးကို ထိုင်းဖက်က ကုန်ပစ္စည်းတွေ တော်တော်များများ သွင်းတဲ့ လူတယောက် လို့ မန်နေဂျာတွေက ပြောပြဖူးသည် ။ အကြီးဆုံး မန်နေဂျာနဲ့လည်း လည်ပင်းဖက် ပေါင်းသင်းနေတဲ့ လူမို့ ဆိုင်ကြီးတဆိုင်လုံးက ဝန်ထမ်း အလုပ်သမားတွေ က “ ကိုရွှေသိမ်းမင်း ”ကို မသိသူ မရှိ အားလုံးက ချစ်ခင်ကြသည် ။ သူကလည်းလက်ဖွာသည် ။ လက်မခက်ဘူး ။ ပေးသည် ။ ကျွေးသည် ။ လူ့အကျော လူ့မနောကို သိသည် ။ ပေါင်းတတ်သည် ။ ဝင်တတ် ထွက်တတ်သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်လည်း မကြာခင်ဘဲ မိန်းမဆောင်တဆောင်ကို ပြောင်းဖြစ်သွားသည် ။ အခု ရွှေရည်ဝင်းထိန် ကမာရွတ် လှည်းတန်းမှာ နေသည် ။ စည်ကား ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ လှည်းတန်းလမ်းမှာ နေနေရတာကို ရွှေရည်ဝင်းထိန် ဂုဏ်ယူသည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန် နေတဲ့ အဆောင်မှာက မိန်းကလေးတွေ အများကြီး နေသည် ။ မော်ဒယ်သင်တန်း တက်နေသူတွေ ရှိသလို ကေတီဗီမှာ လုပ်နေသူတွေလည်း ရှိသည် ။
ရွှေရည်ဝင်းထိန် နဲ့ မိန်းကလေးတွေ ခင်မင်သွားကြတော့ သတင်းစုံ သိရ ကြားရ သည် ။ ရှေ့တက်လမ်းအတွက် ဘာသင်တန်းတွေ တက်ရင် ကောင်းမလဲ အကြံဉာဏ်တွေ ရလာသည် ။ ကိုရွှေသိမ်းမင်း လည်း စူပါမားကက်ကြီး တခုလုံးမှာ အလှဆုံး ရွှေရည်ဝင်းထိန်ကို သဘောကျပြီး ရွှေရည်ဝင်းထိန်ကို လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးပြီး ခင်မင်အောင် “ ဝင် ”လေတော့သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်လည်း နယ်က မိဘတွေဆီကို ငွေလည်း ပို့ချင်တာကြောင့် အစစ ချွေတာ ကျစ်နေရတဲ့ အချိန် အခုလို “ ချွေ”လာတဲ့ ကိုရွှေသိမ်းမင်းကို ကြာလာတော့ “ ကြွေ ”လာသည် ။ သူတို့ သာမန် ခင်မင်မှုထက် သာတဲ့ ပိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေ ဖြစ်လာကြသည် ။ ဆိုင်က အလုပ်ပြန်ချိန်မှာ ကိုရွှေသိမ်းမင်းက လာစောင့်နေတတ်သည် ။ နန်းကြီးသုတ်လေး ..ရှမ်း ခေါက်ဆွဲလေး..အတူတူ စားပြီးမှ လှည်းတန်းက အဆောင်အောက်အထိ ကိုရွှေသိမ်းမင်းက ရွှေရည်ဝင်းထိန်ကို လိုက်ပို့သည် ။ သံယောဇဉ်တွေ တရစ်ပြီး တရစ် ချည်နှောင်မိလာကြတော့ ရွှေရည်ဝင်းထန် နဲ့ ကိုရွှေသိမ်းမင်းတို့ ချစ်မိသွားကြသည် ။
ကိုရွှေသိမ်းမင်းက ချစ်ရေးဆို ချစ်စကားပြောလာသောအခါ ဒီလူကြီးက သူမ အတွက် အားကိုးစရာ အမှီသဟဲ ပြုစရာ လူတယောက်လို့ ရွှေရည်ဝင်းထိန် ထင်မိတဲ့အတွက် သူ့ကို ပြန်ချစ်လိုက်သည် ။ ကိုရွှေသိမ်းမင်းသည် အရမ်း အလိုက်သိတတ်တဲ့ လူတယောက် လို့ ရွှေရည်ဝင်းထိန် ထင်မိသည် ။ အရမ်းသဘောကောင်းသည် ။ အနှမျော မရှိ ပေးတတ် ကမ်းတတ်သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန် အတွက်သာ မကဘူး ။ နယ်က ရွှေရည်ဝင်းထိန်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ မောင်နှမတွေ အတွက်လည်း တဖက်နိုင်ငံက ပစ္စည်းတွေ ယူလာပေးတတ်သည် ။ ကိုရွှေသိမ်းမင်း တခါတခါ နယ်စပ်ကို သွားရင် ရွှေရည်ဝင်းထိန် တယောက် လွမ်းပြီး ကျန်ရစ်ရသည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထန် သည် ကိုရွှေသိမ်းမင်း တယောက် မြန်မြန် ပြန်လာပါစေ ဆုတောင်းရတာ အမော ။ ပြန်လာတဲ့ အခါမှာလည်း တခါ တမျိုးမက ရွှေရည်ဝင်းထိန်ကို ဆင်သည် ။ သူ ပြောပြောပြတဲ့ တဖက်ကမ်းကိုလည်း ရွှေရည်ဝင်းထိန် စိတ်ဝင်စားလာရသည် ။
သူက နောက်တခါ သွားတဲ့အခါ ရွှေရည်လေး လိုက်လည်ပါလား..ရွှေရည်လေးနဲ့ အကိုနဲ့ ဈေးလျောက် ဝယ်ကြမယ်..အစားတွေ ဝယ်စားကြမယ်…အရမ်း ပျော်စရာပါလို့ ခေါ်သည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်လည်း အလုပ်က ခွင့်ရရင်တော့ တပတ်လောက် လိုက်လည်ချင်လာသည် ။ မန်နေဂျာကြီးကို မေးမြန်း ခွင့်တောင်းလိုက်တော့ မန်နေဂျာကြီးက ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ ညည်းက ရွှေသိမ်းမင်းနဲ့ လိုက်သွားမလို့ပေါ့လေ…ရတယ်..ရတယ်..ငါ ခွင့်ပြုတယ်….လို့ ခွင့်ပေးသည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန်သည် ချစ်သူနဲ့ အခုလို ညအိပ်ညနေ ခရီး လိုက်သွားရင် သူတို့ ညိစွန်းကုန်မည်ကို သိသည် ။ သဘောပေါက်သည် ။ ဒီလူ့ကို သူမ အရမ်း ချစ်မိနေပြီ ။ ယုံလည်း ယုံကြည်သည် ။ ပုံအပ်ဖို့ သူမ ဝန်မလေးဘူး ဆိုတော့ သူခေါ်ရာကို လိုက်သွားတော့သည် ။
တဖက်ကမ်းကို မကူးကြခင် ဒီဖက်ကမ်းမှာ ဟိုတယ်မှာ တည အိပ်ကြရသည် ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန် လည်း ဒီညတော့ဖြင့် ချစ်သူနဲ့ အဆုံးစွန်အထိ ခစ်ဖြစ်ကြတော့မယ် လို့ ထင်ထားသည် ။ သို့ပေမယ့် သူမကသာ မျှော်လင့်ထားပေမယ့် ကိုရွှေသိမ်းမင်းက ပါးကလေး မွှေးမွှေးပေးတာ နဖူးလေး နမ်းတာလောက်ကနေ မပိုဘူး ။ ရွှေရည်ဝင်းထိန် သူ့ကို အားမရလိုက်တာ ။ တကုတင်ထဲ အတူတူ အိပ်ကြပေမယ့် သူ့ဖက်က စမလာတော့ ရွှေရည်ဝင်းထိန်လည်း ပြင်းပြလာတဲ့ စိတ်အဟုန်ကြောင့် သူ့ကို အတင်းဖက် သူ့လက်တွေကို ဆွဲယူပြီး သူမ ရင်မို့မို့အပေါ်ကို တင်ပေးလိုက်သည် ။
ဒီလိုကျတော့ သကောင့်သား မနေနိုင်တော့ဘဲ ရင်စိုင်တွေကို ပီပီပြင်ပြင် နယ်ဖတ်တော့တာဘဲ ။ ထောင်မာနေတဲ့ ရွှေရည်ဝင်းထိန်ရဲ့ ရင်သီးလေးတွေကိုလည်း သူ့လက်တွေနဲ့ ပွတ်သည် ။ သူ့လက်တွေက ရွှေရည်ဝင်းထိန်ရဲ့ တင်ပါးတွေကိုလည်း ဆုပ်နယ် ကိုင်တွယ်သည် ။ ဒါပေမယ့် ရှေ့ဆက် မတိုးဘဲ အိမ်သာသွားမည် ဆိုပြီး အိပ်ရာကနေ ထသွားလိုက်သည် ။ သူ့ ပုဆိုးကြားက ထောင်ထနေတဲ့ သူ့ဟာကြီးကို ရွှေရည် ဖျတ်ကနဲ တွေ့လိုက်ရတော့ သူလည်း ရွှေရည့်လိုဘဲ သဘာဝစိတ်တွေ ပြင်းထန်နေတယ် ဆိုတာ သိလိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် သူက အိမ်သာထဲမှာ အကြာကြီးဘဲ ကြာနေခဲ့ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့လည်း ရွှေရည့်ကို ဘာမှ ဆက် မလုပ်တော့ဘဲ “ အကိုကလေ..ရွှေရည့်ကို လက်ထပ်တဲ့ ညကျမှ အဆုံးစွန်းအထိ ချစ်ချင်တာ…အကိုက ရွှေရည့်ကို ချစ်တာ တကယ့် အချစ်သန့်သန့်လေး နဲ့ ဆိုတာ ပြချင်တယ်..” လို့ ပြောပြီး အိမ်ရှေ့ဖက်ကို ထွက်သွားလိုက်သည် ။
နောက်တနေ့မှာ တဖက်ကမ်းကို ကူးကြတယ် ။ ဆိုင် တော်တော်များများကို လိုက်ပြပြီး ရွှေရည်တို့ ဒီဖက်ကမ်းမှာတော့ ဟိုတယ် မှာ မတည်းကြဘဲ သူ့အသိမိတ်ဆွေတယောက် ရဲ့ အိမ်မှာ တည်းကြမယ် လို့ သူက ပြောသည် ။ သူနဲ့ ရွှေရည် အဲဒီ အသိအိမ်ကို ရောက်သွားတော့ မိန်းမကြီး တယောက်က လွဲလို့ ဘယ်သူမှ ရှိမနေဘူး ။ သူ့ကိုတော့ ရွှေရည် အရမ်း အထင်ကြီးသွားသည်။ ရွှေရည့်ကို တကယ့် မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်တာလို့လည်း ယုံကြည်သထက် ယုံကြည်သွားရသည် ။ အိမ်ကြီးက ကြီးပြီး မိန်းမကြီးကလွဲရင် ရွှေရည်တို့ နှစ်ယောက်ထဲ ဆိုတော့ အရမ်း လွတ်လပ်တယ် လို့ ခံစားရသည် ။ ညနေစာကို သူက ဆိုင်ကနေ မှာ ကျွေးသည် ။ မိန်းမကြီး သွားဝယ်လာပေးသည် ရွှေရည် ထင်မိတာဘဲ ။ စားစရာတွေနဲ့ ခပ်ခါးခါး အချိုရည်ဘူးတွေ ကို သောက်စားကြပြီး ရွှေရည်တို့ TV ထိုင်ကြည့်ကြသည် ။ ထိုင်းစကားပြောတွေမို့ နားမလည်ကြပေမယ့်တော်တော်ကြာကြာ ကြည့်ဖြစ်ကြသည် ။
ရွှေရည်လည်း အိပ်ငိုက်လာပေမယ့် သူနဲ့ ဧည့်ခန်းက ဆိုဖာအိအိကြီးပေါ်မှာ ဖက်တွယ်ပြီး နေရတာကို ပိုကြိုက်လို့ အိပ်ခန်းထဲလည်း မပြောင်းဘဲ ဆိုဖာမှာ ဘဲ အိပ်ပစ်လိုက်သည် ။ အိပ်မက်ထဲမှာ ရွှေရည့်လက်တွေ ခြေတွေကို တုပ်နှောင်ထားတယ် လို့ မက်တော့ ရွှေရည် ရုန်းကန်ရင်း အော်ဟစ်မိလိုက်သည် ။ ဖျတ်ကနဲ နိုးလာတော့ ခေါင်းတွေ အုံနေသည် ။ အေးစက်စက်ကြီးလည်း ခံစားရသည် ။ မျက်လုံးတွေ ကြိုးစားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ရွှေရည် အရမ်း တုန်လှုပ်သွားသည် ။ အိပ်မက် မဟုတ်ဘဲ တကယ့်ကို ရွှေရည့် လက်တွေ ခြေတွေကို ကားယားကြီး တုပ်ချည်ထားတာကို သိလိုက်ရသည် ။ အို…ရွှေရည့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာ အဝတ်မှ ရှိမနေဘူး ။ ရွှေရည် ကိုယ်တုံးလုံးကြီး…။ အကို..အကို ဘယ်မှာလဲ….ကိုရွှေသိမ်းမင်း ဘယ်မှာလဲ…။ အို..ယောက်ျားကြီးတွေ သုံးလေးယောက်လောက် ရွှေရည့်ကို ဝိုင်းကြည့်နေကြသည် ။ ရွှေရည်လည်း နို့တွေရော ဖင်တွေရော အကုန် ပေါ်လို့ ။
မီးကြီးကလည်း ထိန်ထိန် လင်းနေသည် ။ “ အကို..အကို…..ကိုရွှေသိမ်းမင်း…” လို့ ငိုယို အော်ဟစ်ခေါ်တော့ လူတွေထဲက တရုတ်ကပြား ဘိန်းစားလို ပိန်ကပ်ကပ်နဲ့ လူကြီးက ရွှေရည်ဝင်းထိန်ကို ကြည့်ပြီး ရယ်သည် ။ “ တ မနေနဲ့..နင့်ကို ရောင်းစားပြီး ဒီလူ လစ်သွားပြီ….ဒီအချိန်က စပြီး မင်းကို ဒို့တတွေ ပိုင်သွားပြီ..မင်းက ဒို့ရဲ့ ငွေနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ ငွေဝယ်ကျွန် ဖြစ်သွားပြီ..ဒို့ ခိုင်းတာကို လုပ်….ဒါဘဲ..” လို့ ခပ်ထန်ထန် မာမာ ပြောလိုက်သည် ။ လူတွေ အားလုံးက ရွှေရည့် ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်တွေကို စားတော့ ဝါးတော့မယ့် မီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့ တဏှာခိုးတွေ ဝေနေတဲ့ မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ ဝိုင်း ကြည့်နေကြသည် ။
“ မလုပ်ပါနဲ့ရှင်..ကျမ မိန်းမကောင်းပါ..ကျမကို လွှတ်ပေးပါ….ရှစ်ခိုး တောင်းပန်ပါတယ်….” “ ဒီမှာ စောက်ကောင်မ ပါးစပ် ပိတ်ထားစမ်း..နင့်ရည်းစားက နင့်ကို မလိုးချင်လို့ မဟုတ်ဘူး. နင့်ကို အပျိုစစ်စစ် အနေနဲ့ ရောင်းသွားတော့ သူက ပိုက်ဆံ ပိုရသွားတယ်..သိရဲ့လား..ငါတို့လည်း နင့်ကို မလိုးဘူး….ပါကင် ပွင့်သွားမှာ စိုးလို့ ပါကင် အနေနဲ့ ဈေးကြီး တင်ရောင်းမှာ…နင့်ကို လီးဘဲ စုတ်ခိုင်းမယ် …” ပြောပြောဆိုဆို ဒီ ဘိန်းစားပုံနဲ့ လူကြီးက သူ့ဘောင်းဘီပွကြီးကို ချွတ်ချလိုက်သည်… ။
ညိုမောင် ရှည်လျားတဲ့ သူ့လိင်တန်ကြီးက မတ်မတ်ကြီး ထောင်နေသည် ။ “ မင်း လီးစုတ်တာကို ငါတို့ ဗီဒီယို မှတ်တမ်း တင်ထားမယ်…မင်းကို သုံးပေါက်စလုံးကို လိုးမယ့် လီးကြီးကြီးနဲ့အာရပ်ကုလား သူဌေးကို ရောင်းစားမယ်…..ကဲ ငါတို့ လီးတွေကို စုတ်ပေးတော့..” မာပြီး ထောင်နေကြတဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးတွေကို စုတ်ရပါတော့မယ် ။ အိုး..ရွှေရည် အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာရှင် ။ ကိုရွှေသိမ်းမင်း ရက်စက်လိုက်တာ ..။ သူ့ကို အချစ်သန့်သန့်လေး နဲ့ ချစ်တဲ့ လူ လို့ ယုံမိတာ အမှားကြီး မှားသွားပြီ….။ တကယ်တော့ အချစ်သန့်သန့်လေး နဲ့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ ကိုရွှေသိမ်းမင်း အမည်ခံ ကောက်တွဲ ( ခေါ် ) ဂျင်မီ ( ခေါ် ) လူခွေး သည် နယ်စပ်က လူကုန်ကူးဂိုဏ်းကို မိန်းမပျိုလေးတွေ လာရောင်းချနေတဲ့ ပွဲစား တယောက်ဘဲ ဖြစ်ပါသည်…. ပြီး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အခဈြသနျ့သနျ့လေး